မိန်းမကိုယ်၊ မွေးလမ်းကြောင်းကနေ ကလေးမွေးခြင်းမှာ ဘယ်သူမှ မပြောကြတဲ့ အကြောင်းအရာ ၅ ခု - Hello Sayarwon
Dr. Aung Myat Thu မှ ရေးသားသည်။4ရက် အကြာက တွင် ပြန်လည်ပြင်ဆင်ခဲ့သည်။
ကလေးမွေးဖွားခြင်းသည် အမျိုးသမီးတစ်ယောက်အတွက် တစ်ဘဝလုံး အမြဲအမှတ်ရနေမည့် အကြောင်းအရာတစ်ခုပင် ဖြစ်သည်။ ကလေးမွေးဖွားခြင်းတိုင်းသည် မိခင်တစ်ယောက်စီတိုင်းနှင့် ရင်သွေးအတွက် ထူးခြားသောအတွေ့အကြုံပင်ဖြစ်သည်။
ထို့ကြောင့် မိခင်တစ်ယောက်အနေနဲ့ ကောင်းမွန်သော မျှော်လင့်ချက်များ နှင့် အတွေ့အကြုံကောင်းများကို ရရှိနိုင်ပါသည်။
ဒီဆောင်းပါးတွင် မိန်းမကိုယ်၊ မွေးလမ်းကြောင်းမှ မွေးဖွားခြင်း၏ လျှို့ဝှက်ချက် ၅ ခုကို ဖေါ်ပြထားပါသည်။
၁။ တစ်ကိုယ်ရည် အညစ်အကြေးများစွာ ပါဝင်ခြင်း။
မွေးဖွားရန်အတွက်ပြင်ဆင်ချိန်တွင် ရင်သွေးငယ်နှင့် အတူ မည်သည့်အရာများက တူတူပါလာမည်ကို အနည်းဆုံး တစ်ကြိမ်တော့ တွေးမိတတ်ကြသည်။ ထင်ရှားသော အချက်အလက်အနေနှင့် စာအုပ်များ၊ ဆောင်းပါးများ (သို့) ကိုယ်ဝန်ဆောင်မိခင်၏ အမေပင်လျှင် မပြောပြသည့် အကြောင်းအရာမှာ ရင်သွေးကို ညှစ်၍မွေးထုတ်လိုက်စဉ် အတူတကွ ဖြစ်ပေါ်သော အူလမ်းကြောင်း၏ လှုပ်ရှားမှုဖြစ်သည်။
မစင်များ၊ ဆီး နှင့် သွေးများသည် ရင်သွေး နှင့်အတူ ထွက်လာမည့် အရာများဖြစ်သည်။
သို့သော်လည်း ရှက်နေခြင်းအတွက် ကလေးမွေးရန် စွမ်းအင်ကို အဆုံးရှုံးခံရန်မဖြစ်ပေ။
ဒီအခြင်းအရာသည် မွေးလမ်းကြောင်းမှ ပုံမှန်အတိုင်းမွေးဖွားသော ဖြစ်စဉ်အတွက် ဖြစ်ရိုးဖြစ်စဉ်သာ ဖြစ်သည်။
ထို့အပြင် ကေလးမွေးဖွားရန်အတွက် ညှစ်ရသော ကြွက်သား နှင့် အူလမ်းကြောင်းကို ညှစ်သော ကြွက်သားတူတူပင် ဖြစ်သောကြောင့် ကြိုတင်ကာကွယ်၍လည်း မရနိုင်ပါ။
ကံကောင်းသည်မှာ ဆရာဝန်နှင့် သူနာပြုတို့သည် ဒီအခြင်းအရာ နှင့် ထိတွေ့နေကျဖြစ်ပြီး သူတို့သည် ရင်သွေး နှင့် မိခင်ကို ကောင်းစွာ ကြည့်ရှုစောင့်ရှောက်မည် ဖြစ်သည်။
၂။ အာရုံခံစားမှု နှစ်မျိုး
မွေးလမ်းကြောင်းမှ မွေးဖွားခြင်း (သို့) သဘာဝအတိုင်းမွေးဖွားခြင်းသည် မိခင်ကို နာကျင်ခြင်း၏ ခံစားချက် အားလုံးကို ပေးမည် ဖြစ်သည်။ မိခင်သည် အဓိက အာရုံခံစားမှု ၂ မျိုးဖြစ်သည့် နာကျင်ခြင်း နှင့် ဖိအား ကို ခံစားရမည် ဖြစ်သည်။
မိခင်သည် ကလေးအပြင်သို့ ထွက်လာစေရန် စညှစ်သည် နှင့် သားအိမ်ခေါင်းကို ဖိအားဒဏ် စတင်ခံစားရမည်ဖြစ်သည်။ ကလေးသည် မွေးလမ်းကြောင်းတစ်လျှောက် ဆင်းလာသည် နှင့်အမျှ ဖိအားဒဏ်ကို ညှစ်သည့် အချိန်တွင်း ခံစားရသည်မှ အမြဲတမ်းပို၍ ခံစားရသည်ထိ ဖြစ်လာမည်။
မွေးလမ်းကြောင်းတစ်လျှောက်ဆင်းလာသော ကလေးသည် အာရုံကြောများကို ဖိသောကြောင့် အူလမ်းကြောင်းကိုပါ လှုပ်ရှားစေသည်။
မွေးလမ်းလမ်းကြောင်းမှ မီးဖွားစဉ်တွင် မိန်မးကိုယ် အနီးတဝိုက်ရှိ အရေပြားနှင့် တစ်ရှူးများသည် ကလေးမွေးလမ်းကြောင်းအတိုင်း ဆင်းလာသည်နှင့် ပြန့်ကားပြီး စုတ်ပြဲသွားနိုင်သည်။
ထိုအချိန်တွင် အလွန်ပြင်းထန်သော နာကျင်မှုကို ခံစားရနိုင်ပြီး မွေးဖွားပြီးချိန်တွင် မိန်းမကိုယ်မှ စအိုဝထိ စုတ်ပြဲသွားသည့် နာကျင်မှုမျိုးထိ ခံစားရနိုင်သည်။
၃။ အဆက်မပြတ် လေရှူသွင်းခြင်းသည် အကူအညီပေးသည်။
သိပ်အသုံးမဝင်လောက်ဘူးဟု ထင်နိုင်သော်လည်း အသက်ဝဝရှူခြင်းသည် ကလေးမွေးခြင်းအဆင်ပြေစေမည့် နည်းလမ်းကောင်းတစ်ခု ဖြစ်သည်။
မီးမဖွားခင်တွင် အသက်ဝဝရှူတတ်စေရန် လေ့ကျင့်ထားခြင်းသည် ကောင်းကောင်းညှစ်နိုင်စေပြီး နာကျင်ခြင်းများတွင် တည်ငြိမ်နေစေသည်။
တည်ငြိမ်အေးဆေးနေစေရန် နေ့စဉ် အသက်ရှူလေ့ကျင့်ခန်းများကို အာရုံစိုက်ကာ လုပ်ဆောင်ရမည်။
ယောဂလေ့ကျင့်ခြင်းသည် အခြားကောင်းမွန်သော ရွေးချယ်မှု တစ်ခုခြစ်သည်။
ကိုယ်ဝန်ဆောင်မိခင်သည် မိမိ၏ လက်တွဲဖော် နှင့်လည်း တူတူလေ့ကျင့်နိုင်သည်။
အကယ်၍ ကလေးမိခင်သည် စိတ်မတည်ငြိမ် ထိန်းချုပ်၍ မရလျှင် လက်တွဲဖော်က ကူညီပေးနိုင်သည်။
ပါးစပ် နှင့် လည်ချောင်းကို ကျယ်ကျယ်ဖွင့်ပြီး အသက်ရှူတတ်စေရန် လေ့ကျင့်ရမည်။ မီးဖွားနေစဉ်တွင် မိခင်၏ ခန္ဓာကိုယ်သည် ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ နှင့် စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာပါ အကောင်းမွန်ဆုံးဖြစ်နေစေရန် ဖြစ်သည်။
၄။ မွေးဖွားရ လွယ်ကူစေရန် ရွေ့လျားနေခြင်း။
ပုံမှန်အရဆိုလျှင် မိခင်များသည် ကလေးမွေးရာတွင် လှဲလျောင်းနေသော အနေအထားဖြင့်သာ မွေးဖွားသည်ကို တွေ့ရသည်။ သို့သော် ထိုအနေအထားသည် မိခင်ရော ကလေးအတွက်ပါ အကောင်းဆုံးသော အနေအထားမဟုတ်ပေ။
မီးဖွားချိန်တွင် ရွေ့လျားနေခြင်း (သို့) ဖြောင့်ဖြောင့်ရပ်နေခြင်းသည် ကလေးနှင့် မိခင်အတွက် ကောင်းသော အကျိုးကျေးဇူးများရှိသည်။ မီးဖွားချိန်တွင် ရွေ့လျားခြင်းနှင့် ပုံစံအနေအထားသည် အံ့သြဖို့ကောင်းသည်။ ရွေ့ထားနေခြင်းသည် ဦးနှောက်ရှိ နာကျင်ခြင်းကို သိရှိသော လက်ခံနေရာများ၏ အာရုံခံစားမှုကို လျော့ကျစေသည်။ မိခင်ဖြစ်လာမည့် ကိုယ်ဝန်ဆောင်သည် သက်သောင့်သက်သာ ရှိနေစေရန်နှင့် ညှစ်ခြင်း၏ နာကျင်ခြင်းများကို သက်သာစေမည့် ဖြောင့်ဖြောင့်အနေအထားကို ကျင့်သားရအောင် ပြုလုပ်ထားသင့်သည်။
အချို့သော ဖြောင့်ဖြောင့်အနေအထားများမှာ မတ်မတ်ရပ်ခြင်း ၊ ရှေ့သို့ကိုင်းနေခြင်း ၊ ထိုင်ထပြုလုပ်သည့် ပုံစံ၊ ထိုင်နေခြင်း နှင့် ဘေးတစောင်းလှဲနေခြင်း တို့ပါဝင်သည်။ အနေအထားတစ်ခုခြင်းစီကို မွေးဖွားခြင်း၏ ပထမအဆင့် နှင့် ဒုတိယအဆင့် တို့တွင် အသုံးပြုနိုင်သည်။ မိခင်၏ အခြေအနေ နှင့် ဆရာဝန်၏ ညွှန်ကြားချက်အပေါ် မူတည်၍ မိခင် နှင့် အကောင်းဆုံးဖြစ်မည့် ပုံစံအနေအထားကို ကျင့်သားရအောင် ပြုလုပ်နိုင်သည်။
၅။ အချိန်ခဏအတွင်း ပြန်လည်သက်သာလာခြင်း။
မွေးလမ်းကြောင်းမှ ကလေးမွေးပြီး မိခင်ဖြစ်လာမည့် ကိုယ်ဝန်ဆောင်တိုင်းသည် ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာအားဖြင့် ကြမ်းတမ်းခက်ခဲသည့် ကြာရှည်သော မွေးဖွားခြင်း ဖြစ်စဉ်ကို ကျော်ဖြတ်ရမည်။ သို့သော်လည်း မွေးလမ်းကြောင်းမှ မွေးဖွားခြင်း၏ ကောင်းကျိုးများမှ တစ်ချက်မှာ မွေးလမ်းကြောင်းမှ မွေးဖွားခြင်းသည် အချိန်ခဏအတွင်း ပြန်လည်သက်သာလာခြင်း ဖြစ်သည်။
မွေးလမ်းကြောင်းမှ မွေးဖွားခြင်းသည် သဘာဝဖြစ်စဉ် ဖြစ်သောကြောင့် ခန္ဓာကိုယ်သည် အချိန်နှင့်အမျှ သဘာဝအလျောက် သက်သာလာမည်ဖြစ်သည်။ ပုံမှန်အားဖြင့် မွေးလမ်းကြောင်းမှ မီးဖွားခြင်းကို ရွေးချယ်သော ကိုယ်ဝန်ဆောင်မိခင်သည် ၂၄ နာရီ မှ ၄၈ နာရီ အတွင်း ပြန်လည် သက်သာလာမည်ဖြစ်သည်။ နေကောင်းလာလျှင် မီးဖွားပြီး အမျိုးသမီးသည် မျှော်မှန်းထားသည့် အချိန်ထက် စော၍ ဆေးရုံမှ ဆင်းနိုင်သည်။ မီးဖွားပြီး လူနာအတော်များများသည် အိမ်တွင် ရင်သွေး နှင့် မိသားစုနှင့် အတူနေထိုင်နိုင်ရန် အိမ်ပြန်ဖို့သာ ရွေးချယ်တတ်ကြသည်။
ဘဝ၏ အထူးခြားဆုံးဖြစ်သော မီးဖွားခြင်းအကြောင်းပြောရန် အများကြီးကျန်ပါသေးသည်။ ဒီဖုံးကွယ်ထားသော အကြောင်းအရာများသည် ရင်သွေးငယ်ကို ကြိုဆိုရန် အကောင်းမွန်ဆုံး အထောက်ပံ့ပေးနိုင်မည်ဟု မျှော်လင့်ပါသည်။
Vaginal birth vs C-section. http://www.livescience.com/45681-vaginal- birth-vs- c-section.html.
Labor childbirth phases. http://www.parents.com/pregnancy/giving-birth/labor- and-delivery/labor-
childbirth-phases/. Accessed August 8, 2016.
What to Expect DuringaVaginal Deliver. http://www.healthline.com/health/pregnancy/intrapartum-
care-vaginal- delivery. Accessed August 8, 2016.
Vaginal birth after C-section (VBAC). http://www.mayoclinic.org/tests-procedures/vbac/basics/why-
its-done/prc- 20020457. Accessed August 8, 2016